द्रौपदीले कसरी र किन पाइन त पाँच पति ? – Butwal Sandesh
द्रौपदीले कसरी र किन पाइन त पाँच पति ?
महाभारतकी अमर पात्र द्रौपदी आफ्ना पाँच पतिका कारण सधैं वि*वादमा रहिन् । बहुपति प्रथालाई स्वीकार नगर्ने समाजमा द्रौपदीको कदम क्रा*न्तिकारी थियो जसका कारण उनीमाथि अनेकौं ला*ञ्छना लागे ।
हुन त द्रौपदीले अर्जुनसँग मात्र विवाह गरेकी हुन् तर उनको सम्बन्ध अर्जुनका दाजुभाइसँग हुन पुग्यो । द्रौपदी अर्जुनलाई मात्र प्रेम गर्थिन् कि ? अझ कर्णलाई पनि मन पराउँथिन् कि ? साँच्चै उनका पाँच पति थिए त ? वनवासमा रहँदा अर्जुनले ब्राह्मणको भेष बनाएर द्रौपदीलाई स्वयंबरमा जितेका थिए । प्रतिबिम्बमा हेरेर माछाको आँखामा निशान लगाउने परीक्षा जितेपछि द्रौपदी अर्जुनकी भइन् । तर अर्जुनका दाइ युधिष्ठिरले पहिला आफ्नो विवाह हुनुपर्ने बताए । अनि राजकुमारी द्रौपदी सबै पाण्डव भाइको पटरानी हुनुपर्ने पनि भने ।
द्रुपदले यस्तो बहुपतिमा आ*पत्ति उठाएपछि वेदव्यासले उनलाई द्रौपदीको पूर्वजन्मका बारेमा सम्झाएर राजी गराए । पूर्वजन्ममा भगवान् शिवसँग हडबडाएर पाँच वर मागेका कारण द्रौपदीले पाँच पति पाउने रहस्य रहेको वेदव्यासले सम्झाए ।
द्रौपदी कर्णप्रति आसक्त थिइन् भनी बंगाली उपन्यासकार चित्रा बनर्जी दिवकरुणीले द प्यालेस अफ इल्युजनमा कथा बनाएकी छिन् । कर्णले द्रौपदीलाई पाउन नसकेको पी*डा द्युतसभामा अ*पमान गरेर शमन गर्न खोजे । तर महाभारतलाई गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने द्रौपदी कृष्णलाई मन पराउँथिन् भन्ने देखिन्छ ।